NAIROBI: Gabadhii la afduubtay ee Hafsa Maxamed Luqmaan oo nolol lagu helay – Calanka.com
Ciidanka Booliska dalka Kenya ayaa ku guuleystay inay helaan Gabar lagu magacaabo Xafsa Maxamed Luqmaan oo maalmo kahor ay waayeen qoyskeeda oo kunool Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalkaas.
Qoyska Xafsa Maxamed ayaa xaqiijiyay in gabadhooba oo maalmo ka maqneyd ay heleen, iyada oo nool oo nabad qabta, isla markaana ay socdaan baaritaano kala duwan oo ku aadan qaabkii loo afduubtay markii hore.
Sidoo kale Qoyska ayaa tilmaamay in kiiska Xafsa ay gacanta ku hayaan laamaha amniga Kenya oo markii horey la sheegay in koox hubeysan ay afduub ahaan uga wateen Nairobi, sidoo kalena baraha Bulshada lagu faafiyay Sawiradeeda ay ka muuqdeen jir dil.
Xafsa Maxamed Luqmaan ayaa ah gabar goob Ganacsi ku leh Caasimadda dalka Kenya ee Magaalada Nairobi, iyadoona kasoo jeeda Magaalada Mandheera, waxaana welwel farabadan qabay maalmihii ay maqneyd qoyskeeda.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa gudaha Kenya falal isugu jiray afduub iyo dil loogu geystay gabdho Soomaali ah, waxaana Mombaasa lagu dilay gabar lagu magacaabi jiray Najma Cabdullaahi Macalin oo markii hore la waayay saddex maalmood, kadibna dhaawac ahaa loo helay, taas oo markii dambe geeriyootay.